Fampitaovan’ny Vigie ny CUA: niampy ny « camera » hanaraha-maso ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra | NewsMada
Fampitaovan’ny Vigie ny CUA: niampy ny « camera » hanaraha-maso ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra
Hanaraha-maso ny asa sy ny fifamoivoizana. Natao, omaly, tetsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely koa ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny CUA sy ny orinasa VIGIE. Natao hanatsarana ny fifamoivoizana sy ny fanadiovana ny tanàna izany.
Hanampy ny kaominina amin’ny alalan’ny « Direction des transports de grand ville urbains » sy ny SMA amin’ny fanadiovana ny lalana sy ny fomba fanalana ny fako amin’ny fanaraha-maso amin’ireny fiara maka fako ireny. Ho avy koa ny « Voiture de vantouse » ho an’ny sampana « Mobilité urbaine » amin’ny fanalana ireo «épave » Nahazo fitaovana, toy ny radio, gillet koa ireo « brigade mobile » amin’ny fantanterahana ny asany. Manampy izany ny nanomezana ny “Camera de surveillance” apetraka amin’ireo toerana, tena ahitana fitohanan’ny fifamoivoizana, ahafahana manara-maso ny fifamoivoizana.
Tsiahivina fa efa manana izany fitaovana izany, miisa 20 ny eto an-dRenivohitra ka mbola niampy roa indray izany, omaly.
Fahaizan’ny polisy monisipaly miaro tena…
Ankoatra izany, nofaranana, omaly teny amin’ny vondron’ny Polisy monisipaly tetsy Anosipatrana ny fanamafisana ny fahaiza-manao eo amin’ireo am-perinasa. Niatrika izany ny ben’ny tanàna Andriantsitohaina Naina sy ny mpiara- miasa aminy. Nahafahan’izy ireo mitadidy fitsipika maromaro, namerina sy nanamarika ny efa hay ny fiofanana. Teo koa ny fifampizarana ny traikefa sy ny hevitra vaovao fanatsarana hatrany ny asa eo amin’ny Vondrona. Eo koa ny fampianarana ny fahaizana miaro-tena, ny manavotra olona , ny fandridrana ny fifamivoizana ary ny fanamafisana ny fampiarana ny fitsipika CMH. Nisy rahateo ny fampisehoana «demonstration” ho famintinana ny fiofanana natao.
Tafiditra amin’ny laharam-pahamehan’ny ben’ny Tanàna ao anatin’ny Veliranon’Iarivo ny fanatsarana ny vondrona Polisy monisipaly sy ny sampana mpamonjy voina. Mba ho asa mendrika sy mahafaly ny mponina. Tanjona ny mba ho matihanina tanteraka izy ireo amin’ny asa ataony.